Gini mere taya ji agha agha mgbe enwere uzo ike-News Center-NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD
Kedu ihe kpatara na taya ahụ ka na-ada mgbe enwere ike nrụgide
Oge: 2021-05-31 Hits: 13
Site na nyocha nyocha nke taya ahụ, nrụgide taya ahụ zuru oke, gịnị kpatara taya ahụ ji dị ala?Ka anyị leba anya!
The taya bụ otu n'ime ụgbọala akụkụ ahụ mapụtara, na bụkwa ụgbọala nwere ike na-agba ọsọ dị mkpa akụkụ ahụ mapụtara.Ma ị nwere ike ikwu n’ezie na ị maara ihe ọ bụla gbasara taya?
1. O doro anya na nsogbu taya ahụ ezuola, gịnị kpatara ọ ka ji adị ntakịrị?
Ọtụtụ mgbe, na nke a, ọ dịghị mkpa ịnọgide na-agbanye mmanụ ọkụ.Taya taa bụ igwe agụụ, ọ bụrụhaala na nrụgide taya ahụ nọrọ n’etiti 2.2-2.6BAI, ị dị mma.Ọ bụrụ na nrụgide taya ezuola, ọbụlagodi na taya ahụ dị ntakịrị ntakịrị, ọ dị mma. Nke ahụ adịghị mma.
2. Gịnị bụ ojiji nke "N'ime" akara na taya?
"N'ime" ihe ịrịba ama na-arụ ọrụ dị mma ma na-adịghị mma, arụnyere n'ime.Ọ bụrụ na ihe ịrịba ama ahụ dị na mpụga, ị nwere ike ijide n’aka na taya ahụ dị n’akụkụ na-ezighi ezi ma rịọ maka Mbugharị.Ebe ọ bụ na arụnyere taya na ntụgharị ihu, ihu kọntaktị nke taya na ala dị iche, mana iji mee ka ngwa ngwa taya ahụ dị ngwa.
Kedu ihe ntụpọ edo edo na taya pụtara?
Oghere na-acha odo odo na taya ahụ, ọ bụghị onye nrụpụta na-etinye agba na mberede, ma akara akara, bụkwa ebe ọkụ kachasị.N'ihi na ọnụ valvụ ahụ dị na taya ahụ pụta, yabụ ọnụ valvụ bụ ọnọdụ kachasị njọ na taya ahụ dum, ya na ebe edo edo dị nfe, ịdị arọ ga-abụ nkezi, rụọ ọrụ na ịhazi taya ahụ.
Previous: Automobile tire valvụ nozulu, ihe ọmụma iwebata
Ọzọ: Igwe na-adịghị ala ngwa ngwa, ma ọ bụ ihe yiri ya